'Chucky' Series Teaser ibuyisa iDoll ibuyele kwiiNqobo zayo eziQhelekileyo (eziBomvu)
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'Chucky' Series Teaser ibuyisa iDoll ibuyele kwiiNqobo zayo eziQhelekileyo (eziBomvu)
by UTimothy Rawles Julayi 16, 2021
by UTimothy Rawles Julayi 16, 2021 4,026 imbono
Amehlo aluhlaza-olo tyikityo luyahleka; eyantlandlolo Chucky ibuyile kuthotho olutsha lwegama elifanayo le-SYFY kunye ne teaser enomdla esandula ukuhla namhlanje!
Into yokubulala ebomvu enentloko ebomvu iphinda yonakalise abantu, kwaye kwilizwe loyikekayo ziindaba ezinkulu ezinikwe zonke iitalente ezisemva kolu ngcelele; umfumene umdali woqobo uDon Mancini kunye neqela lakhe alithandayo labadlali- abanye bathandana yonke indlela ebuyela kuqobo. Oku kubandakanya uJennifer Tilly, uFiona Dourif, uAlex Vincent, uChristine Elise, kwaye kunjalo nelizwi elisemva kukaBrad Dourif.
Abafikayo uLexa Doig (Jason Xkunye noDevon Sawa (Ukupheliswa kokugqibelaukujikeleza abadlali kwisizukulwana esitsha sabalandeli.
"Umlinganiswa ophambili yinkwenkwe eneminyaka eli-14 ubudala eyinkwenkwe ehlukunyezwayo nohlobo olulahlekileyo emva kokubhubha kukanina," uMancini uxelele i-EW. “Ungumzobi oselula [owenza] imifanekiso eqingqiweyo enamalungu onodoli. Ufumana uChucky kwintengiso yeyadi kwaye uyamthenga, kodwa kuyacaca ukuba ufumana okungaphezulu lee kunoko ebekuthethile. ”
UMancini usebenze nzima esenza olu ngcelele lwendalo nkqu nangubhubhane. Kubonakala ngeli xesha ehambisa i-aura yoqobo ye-franchise ngokunika u-Chucky umlingane osemncinci. Nangona, ngokungafaniyo kwasekuqaleni uChucky adlala ngaye eneminyaka emithandathu ubudala, ngeli xesha uGen Z-er (Arthur) onengxaki udlala ukuzikhusela.
UMancini wongeza athi: “Enye yezinto endandifuna ukuyenza yayikukubuyisa [ilungelo lokuthengisa ngentengiso] kwakhona Play Child Iingcambu kwaye babe nabalinganiswa abaphambili [babe] ngabantwana. Kodwa ukusukela, ngemboniso bhanyabhanya yokuqala, besisele sigqibe kwelokuba sibe nabantwana abancinci bendifuna ukuphonononga enye into eyahlukileyo, ke ngeli xesha siphonononga ulutsha. ”
UTee Briones, uAlyvia Alyn Lind, kunye noBjörgvin Arnarson nabo banenkwenkwezi.
Ukuba ucinga ukuba uChucky ujongeka eqhelekile, iliso elilungileyo! Isibumba sedoli sithathwa ngqo kwi-in Ukudlala komntwana 2. Olu luhlu lutsha luya kuqala kwijelo le-SYFY ukuqala nge-12 ka-Okthobha ka-2021, kwaye iya kuba neziqendu ezisi-8.
UMancini uthi ukuba umboniso uyaphumelela kuya kubakho amaxesha amaninzi azayo.
Jonga i-teaser engezantsi kwaye uqhubeke nokulandela iHorror ngolwazi oluthe kratya malunga nolu chungechunge lutsha loyikekayo.
Umfanekiso wentloko uthathwe kwi-EW.com.